Solana Archives - Page 2 of 3
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD i-Range-bound, i-Uptrend inokwenzeka
I-Solana ibotshelelwe phakathi kwee-avareji ezihambayo
I-SOL/USD inexabiso elijoliswe kwi-251 yeedola
Ixabiso langoku: $ 218.68
Intengo yeNtengiso: $ 111,437,601,610
Umthamo wokuThengisa: $ 3,064,439,944
Solana (SOL) Uhlalutyo lweXabiso ngoNovemba 22, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso lingaphezulu komgca weentsuku ezingama-50 kodwa ngaphantsi komgca weentsuku ezingama-21 ezihambayo. Izolo, abathengi abakwazanga ukwaphula umyinge weentsuku ezingama-21. Ikhefu ngaphezu kwe-21-day SMA iya kutyhala i-cryptocurrency ukuya kwi-300 yeedola eziphezulu. Ngokufanayo, ikhefu elingaphantsi kwe-50-day SMA liya kutshona i-altcoin ukuya kwi-$ 140 ephantsi. Nangona kunjalo, i-SOL / i-USD iya kuba kwinqanaba lokuhamba-hamba ukuba imigca emibini ehambayo ihlala ingaphulwanga.
I-Solana iwele kwinqanaba le-49 le-Relative Strength index period 14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. I-cryptocurrency ikwinqanaba lokuhamba njengoko liguquguquka phakathi komgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50. I-Solana ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwisantya esiphakamileyo njengoko inyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, uSolana ukwintshukumo ephezulu. Ixabiso le-crypto liphule ngaphezulu komyinge ohambayo kathathu. Okwangoku, ngoNovemba 20 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-Solana iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 251.86.
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD ifumana inkxaso ngaphezu kwe-$ 225 iphinda iqalise i-Uptrend
Ukuhlaziywa: 16 Novemba 2021
I-Solana ibuyisela kwi-$ 236 ephantsi
Iindibano ze-SOL/USD ukuya kwi-260 yeedola eziphezulu
Ixabiso langoku: $ 236.86
Intengo yeNtengiso: $ 121,293,789,737
Umthamo wokuThengisa: $ 2,391,079,319
Solana (SOL) Uhlalutyo lweXabiso ngoNovemba 15, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso sele kurhweba ngaphezu kwe-avareji ezihambayo. Imarike ibuyela kwinkxaso engaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-21-day SMA. Okwangoku, ngo-Oktobha i-25 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-50% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye i-$ 287.92.
I-Solana ikwinqanaba le-60 le-Relative Strength index ixesha le-14.SOL ikwindawo ye-bullish ye-bullish kwaye iyakwazi ukunyuka ukuya phezulu. I-Solana ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike iwele kwindawo ethengisiweyo.
Kwitshathi yeMiz engama-30, uSolana ebekwintshukumo esezantsi. I-cryptocurrency iwele kwindawo ethengiswa kakhulu. Okwangoku, ngoNovemba 15 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-6.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 233.74.
I-SOL/USD – Itshathi yeMiz eyi-30
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD iphinda ibuyele kwi-$ 244 ephantsi njengoko iinkunzi zenkomo zizama ukuqalisa phezulu
I-Solana ikwi-uptrend, ijolise kwi-320 yeedola eziphezulu
I-SOL / i-USD yokubuyisela kwi-downside, inokufumana inkxaso engaphezulu kwe-$ 244
Ixabiso langoku: $ 246.81
Intengo yeNtengiso: $ 125,052,674,773
Umthamo wokuThengisa: $ 2,967,592,151
Solana (SOL) Uhlalutyo lweXabiso ngoNovemba 9, 2021
Ixabiso likaSolana (SOL) liyenyuka. Ngo-Oktobha 25, ukunyuka kwathintelwa njengoko i-altcoin yehla yaya kwi-179 yeedola njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Abathengi baqalise ukunyuka okutsha njengoko ixabiso liye laphula uxhathiso kwi-200 yeedola. USolana uthengisa nge-$ 246 ngexesha lokubhala. Okwangoku, ngo-Oktobha i-22 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-38.2% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-Solana iya kunyuka kwinqanaba le-2.618 isandiso seFibonacci okanye i-$ 330.71.
I-Solana ikwinqanaba le-67 ye-Relative Strength index period 14.SOL/USD ikwindawo ephucukileyo kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili ukuya phezulu. I-Solana ingaphezulu kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu.
Kwitshathi yeyure enye, uSolana ebekwintshukumo esezantsi. I-cryptocurrency ifikelele ekudinweni kwe-bearish. I-altcoin okwangoku iguquguquka ngaphezu kwe-$ 1 inkxaso. Okwangoku, ngoNovemba 244 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-7% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-50 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 2.0.
USolana urekhoda iNcopho entsha yeTVL phakathi kokuBullish kwakhona
Ukuhlaziywa: 22 October 2021
ISolana (SOL) urekhode lonke ixesha elipheleleyo ngexabiso elipheleleyo elivalelweyo (TVL) kwiiprotocol zayo zeDeFi. Olu tshintsho lwerekhodi luza phakathi kwamaza amakhulu e-cryptocurrency.
Ngokwengxelo entsha evela ku-DeFi Llama, i-TVL kwi-protocol ye-Solana's DeFi ifikelele kwi- $ 12.7 yezigidigidi ngaphambili izolo. Eli nani liye lehla laya kutsho kwi-12.3 yeebhiliyoni zeedola ngexesha lokushicilela.
Le rekhodi entsha ibaluleke kakhulu kwinethiwekhi, ngokuqwalasela ukuba ngaphambi kuka-Agasti, i-protocol ye-DeFi ye-Solana ayizange idlule i-$ 1.5 yezigidigidi kwi-TVL.
Enye yezona zinto ziphambili zokukhuthaza i-TVL yamva nje kukukhula komdla kwiMarinade Finance, iprotocol ye-liquid staking kwiSolana. Lo mthetho womthetho urekhode ukunyuka kwe-69% kwi-TVL kwiveki ephelileyo kwaye ngoku ikwinombolo yesine ngoku ngokweeprojekthi ezinobona manani aphezulu okuhlawula amatyala, emva kweSunny, iRadium, neSaber.
Ngeli xesha, i-SOL irekhode i-rally emangalisayo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo emva kwe-Bitcoin spike. Kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo, i-SOL ikhule ngaphezulu kwe-28% kwaye ngoku irhweba ngaphezulu kwe-200 yeedola.
Ixabiso elipheleleyo lemarike kutsha nje lifake uphawu lwetriliyoni yeedola ezi-2.5 njengoko ii-altcoins ziqala ukunyuka kwazo phakathi kokulungiswa kwi-BTC.
Amanqanaba aphambili eSolana ukuba abukele-Okthobha 22
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-SOL iphinde yafumana amandla okuqina okuqina njengoko ithatha i-200 yokuxhathisa, iza ngaphezulu kwe-4% ukusuka kwixesha layo lonke eliphezulu kwi-216 yeedola.
ISOLUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Nangona kunjalo, i-cryptocurrency ithumele ukulungiswa okuncinci kufutshane nenkxaso yeedola ezingama-200 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kodwa ihlala inxibelelana ngokusondeleyo ne-arc yethu ye-bullish. Oko kwathethi, silindele ukuphinda sibuye kwaye siqhekeze ngaphezulu komgca we- $ 216 kwiiyure ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 209, $ 216, kunye ne- $ 220, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 150, $ 146, kunye ne- $ 140.
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 62.1 billion
Solana ubukhosi: 2.38%
tags Cryptocurrency, iindaba, SOL, Solana, I-Techniocalanalysis
Uhlalutyo lwamaxabiso eSolana: Ukuphinda ujonge ukuphuma kweNethiwekhi kaSeptemba
Ukuhlaziywa: 15 October 2021
ISolana (SOL) ithumele uluntu lwe-cryptocurrency kwimowudi yokuphaphazela emva kokuphuma kwenethiwekhi ngoSeptemba, neyathi yabangela iingxoxo-mpikiswano malunga neenkqubo ezikwenye indawo ngokuchasene neenkqubo ezisasazwayo kunye neenethiwekhi zePoW ngokuchasene neenkqubo zePoS.
Oko bekuthethile, uSolana wazisa ngengxelo yokuqala yophando ngesiquphe esinesihloko '9-14 Umdibaniso womnatha woVavanyo lwangaphambili' Nge-20 kaSeptemba. Ingxelo yenethiwekhi icacisa ukuba: “Unobangela wale tafile yenethiwekhi yayikukungavumi ukusebenza.
Nge-12: 00 i-UTC, iProtokholi yamaDiliya yasungula i-IDO yabo kwiRaydium, kwaye i-bots yavelisa ukuthengiselana okwagcwala inethiwekhi. Ezi ntengiselwano zenze ukuba inkumbulo iphuphume, eyenze ukuba uninzi lwabaqinisekisi bangqubeke, inyanzela uthungelwano ukuba lucothe kwaye ekugqibeleni luyeke. ”
USolana ubanga ukuba uthungelwano lwayo lunokuqhuba ukuthengiselana okungama-710,000 ngomzuzwana (TPS). Nangona kunjalo, ukuphuma kwenethiwekhi kunye nokudinwa kwezixhobo kwenzeka xa umnatha wafikelela kumthwalo we-400,000 TPS.
Uthungelwano lweSolana ludibanisa inkqubo yoVavanyo lweStake (PoS) kunye nenkqubo yobungqina bembali (PoH) eyahlukileyo. Ngokweengxelo, inethiwekhi yahamba ngaphandle kweintanethi xa isetwork esisemthethweni singavumelani ngemeko esele ibhlokhi, ukuthintela inethiwekhi ekuqinisekiseni iibhloko ezintsha ngexesha lokuphuma. Oko kwathiwa, isiganeko esifanayo senzeka ngaxa lithile ngoDisemba 2020.
Amanqanaba aphambili eSolana ukuba abukele-Okthobha 15
I-SOL ibonakala ngathi iphinde yafumana amandla afanelekileyo emva kokuphula ngaphezulu kwe-200 kunye ne-50 yee-SMA ngaphambili namhlanje. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ngoku ijolise kwindawo ebaluleke kakhulu yokumelana ne- $ 170- $ 180.
Into enomdla kukuba, ukunyuka komkhondo kuye kwavela ukusukela ekuweni kwayo ukuya kuthi ga kwi-116 yeedola ngoSeptemba, ukuqhubela phambili ukomeleza uluvo oluhlaziyiweyo lwentengiso. Kwakhona oku kuqalisa kwakhona kuza ne-SOL kwiimeko zorhwebo ezingathathi hlangothi.
Oko kwathiwa, ukuphindaphinda okuyimpumelelo kwendawo echasene nokuchazwa kwangaphambili kufuneka kuqinise ukunyuka okuzinzileyo kwi-216 yeedola ngalo lonke ixesha kwiiveki ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 170, $ 180, kunye ne- $ 190, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 150, $ 146, kunye ne- $ 140.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.42 zezigidi
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 47.5 billion
Solana ubukhosi: 1.96%
USolana uyayenza kwibhasikithi yotyalo-mali iGreycale nge-3.24% yolwabiwo
Ukuhlaziywa: 4 October 2021
ISolana (SOL) unokubona ukonyuka okuthe tye kwiintsuku ezizayo njengoko iGreycale Investment iphinde ihlengahlengise iiasethi zayo zedijithali iimali zotyalo-mali ukudala indawo ye-SOL kunye ne-Uniswap (UNI). Olu phuhliso luza emva kokubhengezwa kwenkampani kutshanje kuyo "Ukulinganiswa kwemali ngekota" yeGrayscale Digital Large Cap Fund kunye neNgxowa-mali yayo yeDeFi.
Oko bekuthethile, umphathi we-asethi yedijithali we-behemoth uya kunciphisa imali yepotifoliyo yeLitecoin kunye neBitcoin. Imali eyinkunzi eqinisekisiweyo iya kubuyela eSolana nakwi-Uniswap kwiindawo ezininzi.
Oku kuyenza okokuqala ngqa kumphathi wee-asethi ezidijithali ezixabisa i-47 yeebhiliyoni eziya kubonelela ngeemveliso ezinxulumene noSolana kubatyali mali bazo.
USolana, oqhayisa njengeyona ndawo ikhawulezayo ukubhloka emhlabeni, uza kuhlala kwi-3.24% yebhasikithi yotyalo-mali iGreycale. Okwangoku, i-UNI, olona tshintshiselwano lukhulu lokwabela abaphantsi amagunya (i-DEX) e-Ethereum, iya kuthatha i-1.06%. Esi sithembiso senza i-SOL kunye ne-UNI ibe sisincedisi sesine nesesihlanu ngobukhulu kwingxowa yeGrayscale.
Kwindawo yokuqala kukho iBitcoin (GBTC), elawula i-62.2% yepotifoliyo yeGreycale, ngelixa i-Ethereum ithatha indawo yesibini ngama-26%. ICardano (ADA) iza kwinombolo yesithathu kunye neeakhawunti ze5.1% yeefotifoliyo yengxowa mali yedijithali.
Eli nyathelo liza emva kokunyusa ukunyuka kweemveliso zotyalo-mali zikaSolana ngabatyali mali bamaziko kulandela ukusebenza kwawo okumangalisayo. USolana webe umboniso kwisithuba se-altcoin sengeniso yenyanga yenyanga ngoSeptemba, efumana i-59 yezigidi zeedola, ephelisa isibalo se-Ethereum se-35 yezigidi zeedola ngaphandle kokuphela kwenethiwekhi kaSolana ngo-Septemba.
Amanqanaba aphambili eSolana ukuba abukele-Okthobha 4
Kunye nolona shishino, i-SOL irekhode ukubuyela kwimeko entle ukusuka ekuweni kwayo kwakutshanje kwaye ibuyise indawo eyi- $ 170. Oko kwathiwa, ixabiso liwele kulungiso oluncinci phakathi kokuthatha inzuzo encinci ngeenkomo.
Ngokusekwe kwisalathi seMACD, sinokurekhoda ukubuyela umva ngokubhekisele kwi- $ 160- $ 150 yengingqi kwiiyure okanye kwiintsuku ezizayo. Nangona kunjalo, i-rally ye-bullish ebukhali kufuneka ize emva kokulungiswa, ithathela ingqalelo ukwakheka komnqamlezo wegolide okwi-bullish kwitshathi yethu yeeyure ezi-4.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 170, $ 180, kunye ne- $ 190, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 160, $ 150, kunye ne- $ 146.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.11 zezigidi
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 49.3 billion
Solana ubukhosi: 2.3%
USolana (SOL) Uqikelelo lwamaxabiso ngo-2021 nakwiminyaka ezayo- Ngaba i-SOL iya kubetha i-500 yeedola ngo-2021?
Kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, cryptocurrency Imarike ihambe kakhulu. Imali yentengiso ye-crypto idlule kwi-2 yezigidi zezigidi zeedola kwakhona. Oku kukhula kuthathelwe ingqalelo njengophawu lwabaninzi, becinga ukuba enye inkunzi yebaleki sele iza kuqala.
Nangona kunjalo, nge-7 kaSeptemba, idiphu enkulu yenzekile, ishiya ezimbini ezihamba phambili zedijithali, Bitcoin kwaye Ethereum, ngokuhla nge-18%. Ukuchaneka, ngaphezulu kwe- $ 350 yezigidigidi ishiye imarike ye-crypto kwimizuzu nje embalwa, ichaphazela phantse yonke imali ebalulekileyo.
Ngokungafaniyo neBitcoin kunye ne-Ethereum, ezinye ii-cryptocurrensets azikhange zibone ukudipha. Ngokuchasene noko, bekukho abanye abaqhubeka nokuvuka. Omnye wabo ngu SolanaI-cryptocurrency engakhange ifumane nto ngaphandle kokuzuza kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo. Le projekthi ye-crypto ibiqhubekile kulo nyaka, kodwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo zibe neziqhamo ezixabisekileyo.
Ke yintoni uSolana kwaye kutheni le nto ikhula ngolu hlobo? Kulo lonke eli nqaku, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukucacisa ukuba yintoni le projekthi ye-crypto kwaye ijonge ukuyifeza.
ISolana (SOL) iziSiseko
Ukuqala, masichukumise kwimvelaphi yale projekthi ye-crypto. Yasekwa ngu Anatoly Yakovenko, owayesakuba yinjineli, ngoncedo luka URaj Gokal kunye nabanye iinjineli zangaphambili ngo-2017; Nangona kunjalo, ayikhange ichukumise i-beta mainnet de kwangoko-2020. Kuba yaphehlelelwa ngo-2020, uSolana yindalo yesithathu ye-imali yedatha, efanayo neCardano kunye neTezos. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uSolana ukwibeta ephambili, okuthetha ukuba isaphuhliswa. Oko bekutshiwo, uSolana usesekwisigaba sakhe sokuqala kwaye unokufumana imicimbi emininzi xa kuthelekiswa neeprojekthi ze-crypto ezisungulwe ngokupheleleyo. Nangona uSolana emncinci kakhulu, lelinye lawona magalelo makhulu kwindalo yeDeFi, ebonelela ngendlela engaphezulu kwesininzi sezinto eziphezulu zokugcina.
Intsebenziswano yeAudius Cryptocurrency noSolana. Umthombo: Solana
I-Solana yiprojekthi ye-blockchain ene-open-source ebonelela ngeqonga lokuba ii -apps ezisasazwayo zisetyenziswe ukuze ziphuhliswe, kuvavanywe kwaye kusungulwe. Ukukhusela uthungelwano lwayo kunye nokuqinisekisa ukuthengiselana, uSolana usebenzisa indlela yokuQinisekisa (i-PoS) apho abantu ababethelela uSolana basebenza njengabaqinisekisi. Ngokungafaniyo nothungelwano lokuQinisekiswa koMsebenzi (i-PoW), iinethiwekhi ze-PoS zikulungele ngakumbi ukusingqongileyo kwaye azidli mali zininzi zombane. Nangona iziqinisekiso kwinethiwekhi yeSolana PoS zifuna umbane ukuba usebenze, inani lamandla abalisebenzisayo liphantsi kuneenethiwekhi zePoW ezinje ngeBitcoin okanye i-Ethereum miners.
Ngaphandle kokuba inethiwekhi yoBungqina-be-Stake, uSolana usebenzisa into eyaziwa ngokuba yi-Proof-of-History (PoH). Ngale teknoloji, uSolana ujolise ekuphuculeni ukusebenza konaniselwano lwexesha lokunyathela kwinethiwekhi. Ngenxa yezi zinto zintsha, uSolana waziwa njengomnye wababulali base-Ethereum, kunye Cardano kwaye Ipolka dot.
Kutheni uSolana ethathelwa ingqalelo njengombulali we-Ethereum?
Ukunikezela ngeqonga elihle kuphuhliso lwazo zonke iintlobo ze-DApp, ukuxhasa iikhontrakthi ezifanelekileyo, kunye nokuthengiselana okungabizi kakhulu nokukhawulezayo, uSolana ucelomngeni ngokwenene Ethereum. Ngelixa u-Ethereum enokwenza kuphela ukuthengiselana okungama-25 ngomzuzwana, uSolana ubanga ukuba angakwazi ukuqhubekeka ngaphezulu kwe-50,000 yeentengiselwano ngomzuzwana-jonga nje umahluko.
Intsebenziswano kunye noPhando lwe-FTX kunye ne-Alameda kunye noSolana. Umthombo: Solana
Ngaphaya koko, iifizi zerhasi ze-Ethereum zonyuka ziye kwiindawo eziphakamileyo ngeenkwenkwezi rhoqo, zisenza ukuba inkqubo yokuhambisa i-ETH yakho ibize kakhulu. U-Ethereum ubanga ukuba iifizi zerhasi ziya kuncipha kakhulu xa ifolokhwe enzima yaseLondon ihamba-kwaye benjenjalo. Nangona kunjalo, iifizi zerhasi zaqhuma kwakhona nge I-NFT craze esele iqhubekile ixesha elide ngoku. Ngokuchasene noko, uSolana unemali ephantsi kakhulu, ngentengiselwano ebiza malunga ne-0.000005 SOL. Ngexesha lokubhala, oko kuthetha ukuba iifizi zentengiselwano kwinethiwekhi yeSolana zibiza malunga ne- $ 0.001.
Ubambiswano lweMetaplex NFT ngaphambili no Solana. Umthombo: Solana
Kodwa, akukho nto igqibeleleyo, nditsho noSolana. Kukho imicimbi ngeSolana ngaphandle kweziseko zophuhliso kunye netekhnoloji. Kuba isekwinqanaba le-beta, uSolana kusafuneka aphucule inkqubo yokuhanjiswa kwayo. Ukubamba isiqinisekisi seSolana, kufuneka ube nekhompyuter enamandla kakhulu (Iimfuno zeValidator). Oku kutyhala abantu kude nokusingathwa kwezi ziqinisekiso, ezenza ukuba inethiwekhi yeSolana ingabelwa amagunya kangako. Ngaphaya koko, bambalwa abagunyazisi abakho kwinethiwekhi, kokukhona bexinekile ngabasemagunyeni abagcina inethiwekhi.
Ithuba lokuthotywa komsebenzi okwexeshana lihlale malunga nemizuzu engama-62.
Isimo seSolana (@SolanaStatus) Septemba 2, 2021
Oku kubangela iingxaki rhoqo kwinethiwekhi yeSolana, ukuyenza ukuba ihlupheke ngokungazinziyo amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, le micimbi ihlala ingagqithi kwiiyure ezingama-2-3.
Solana (SOL) 2021 Uqikelelo lwamaxabiso
USolana ubenyuka esibhakabhakeni mva nje, ebetha ixabiso leedola ezingama-200 ekuqaleni kukaSeptemba. Kwanasemva kokuba yonke imarike ifumene ukuwa okukhulu ngomhla we-7 kaSeptemba, uSolana yenye yeemali zokugcina ezimbalwa eziye zachacha ngokukhawuleza kwaye zisemi nkqi.
Uqikelelo malunga neSolana lwenziwe yiLongForecast. Uqikelelo lwabo lubonisa ukuba u-2021 anganesiqhamo kakhulu kuSolana, ngale ngqekembe inokubetha i-540 yeedola ngenyanga nge-2021. Ukuphela kwe-367, i-LongForecast ibanga lokuba uSolana angafikelela kwi-2021 ephezulu yeedola.
I-Crypto Academy, nayo indawo enezinto ezinokuqikelelwa ngokuthembekileyo ikholelwa ekubeni uSolana uza kunyusa amandla kwiinyanga ezishiyekileyo zika-2021. yaqikelelwa, USolana ngo-2021 unokufikelela kwi-500 yeedola kodwa kunokwenzeka ukuba ukuba kuyakubakho enye into ebalekayo ngoDisemba 2021 uSolana angafikelela kwixabiso le-1000 ngokusekwe kuqikelelo lweCrypto Academy.
UNathan Sloan, enkulu cryptocurrency Youtuber, wenza ividiyo ngekamva likaSolana kwiintsuku ezithile ezidlulileyo. Kule vidiyo, iSloan isebenzisa indlela ye-'Stock / Flow 'yokuhlalutya itshathi ye-Bitcoin. Emva kwexesha, wenza okufanayo kwitshathi kaSolana; kwaye, ngokokuhlalutya kwakhe, uSolana kungenzeka ukuba akhuphe i-3x-5x kwezi nyanga zintandathu zilandelayo, mhlawumbi efikelela kwixabiso eliphakathi kwe- $ 420- $ 700.
ISolana (SOL) Uqikelelo lwamaxabiso exesha elide
Ngokubhekisele kwixesha elide, kuphela ziiprojekti eziphezulu ze-crypto ezinokuthi ziqhubeke nokukhula kwaye zisinde kwimiceli mngeni ebangelwa yimarike, kwaye uSolana ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona projekthi zibalulekileyo ze-crypto.
Uqikelelo lwexesha elide lweDigitalCoinPrice luyinyani, kuthathelwa ingqalelo zonke izinto ezichaphazela ixabiso ledijithali yemali. Babanga ukuba i-500 yezigidi zeedola kulindeleke ukuba igqithe ngonyaka we-2024, apho i-SOL kulindeleke ukuba ibe ne-547 yeedola ephezulu. Ngapha koko, baxela kwangaphambili ukuba uSolana unokuthengisa ngexabiso elingaphezulu kwe- $ 918 ngoDisemba 2028.
ISolana (SOL) Uqikelelo lwamaxabiso exesha elide. Umthombo: DigitalCoin
Njengoko ibango leGovCapital, uSolana unokuba neminyaka elungileyo ngaphambili. Kunyaka ka-2022, iGovCapital iqikelela ukuba i-SOL inokuba ne- $ 426 ephezulu kunye ne- $ 234 ephantsi. Ukuqhubela phambili, unyaka wama-2023 unokuba ngunyaka xa uSolana egqitha kumawaka ama-500 eedola ngokufikelela kwixabiso lokurhweba le- $ 637. Ukuyisonga, uqikelelo lwe-GovCapital lubonisa i-SOL ihleli ngexabiso eliphakathi kwe- $ 1737- $ 1998 kanye emva kweminyaka emihlanu.
Enye iYoutuber enkulu egubungele ikamva likaSolana yile Utyalomali. Kwenye yeevidiyo zakhe malunga ne-SOL, wabonisa uqikelelo lwexabiso elizayo likaSolana. Ngokwengqikelelo yakhe, uSolana angabetha ixabiso lokurhweba nge-1,200 yeedola ukuphela kwe-2026 kunye ne-3,100 yeedola ngokuphela kwe-2030 ukuba intengiso iyanyusa. Nangona kunjalo, kwinqaku le-bearish, uSolana unokurhweba nge- $ 800 ngethokheni ukuphela kuka-2026 kunye ne- $ 2,200 ngasekupheleni kuka-2030.
Ngaba uSolana uza kugqitha kwi-Ethereum?
Ke, ngaba uSolana uza kuba nakho ukugqitha e-Ethereum? Ewe, asiqinisekanga. U-Ethereum ubekwimakethi ixesha elide, ngelixa uSolana esemncinci. Nangona uSolana esebenza ngendlela eyiyo kune-Ethereum ngalo mzuzu, u-Ethereum uzakhele udumo olukhulu kuyo yonke le minyaka, eyi-cryptocurrency yesibini enkulu kwiminyaka emininzi. Ngaphaya koko, i-Ethereum imiselwe ukuba iphumeze I-Ethereum 2.0, Ukutshintshela kwinethiwekhi yoBungqina-be-Stake kunye nokwenza i-Ethereum ngokukhawuleza. Oku kuthetha ukuba uEthereum ulapha ukuze ahlale.
Nangona kunjalo, emva kweeveki ezithile ezintle, uSolana waba yinxalenye yeshumi leedigital cryptocurrency ngokubhekisele kwiimali zentengiso. Ngexesha lokubhalwa, uSolana ubambe indawo yesithandathu kwiCoinMarketCap, eneRipple kunye neDogecoin njengeembaleki zayo.
Oko bekutshiwo, uSolana kungenzeka ukuba afikelele kwi-Ethereum ngaxa lithile ngexesha. Ukuba uSolana uyayiphucula inkqubo ye-ecosystem yayo ngokukhawuleza kune-Ethereum, isenokudlula kwiimali zayo zentengiso kungekudala.
Imibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ)
Kutheni uSolana esanda?
Izibonelelo zayo sesona sizathu sokukhula okukhulu okufunyanwa nguSolana kwezi veki zimbalwa zidlulileyo. Njengoko abantu benomdla ngakumbi kwi Imali eyabelwe imali (I-DeFi), iithokheni ezingabonakaliyo (i-NFTs), kunye neWeb3, kokukhona ikhula kakuhle inkqubo ye-Solana ye-eco. Ngenxa yokuba igqwesa abo bakhuphisana nabo, ixabiso likaSolana liyenyuka.
Ngaba uSolana ungcono kune-Ethereum?
Ewe nohayi… kuxhomekeke kwindlela ojongwa ngayo. ISolana yindlela eyoyikeka ngakumbi kune-Ethereum, enemirhumo esezantsi kunye namaxesha okuthengiselana ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, isekhona kwi-beta mainnet, okuthetha ukuba isephantsi kophuhliso. Oku kuyenza ingazinzi ngamanye amaxesha. Nangona kunjalo, kufuneka siqaphele ukuba uSolana yindlela ekhawulezayo, engabizi kakhulu, kwaye eyoyikeka kune-Ethereum.
Ngaba iSolana yabiwa kwindawo enye?
Ewe, uSolana ngumnatha owabelweyo blockchain network. Yakhelwe ukwenza ukuba usetyenziso olusasazekayo lusasazeke kwilizwe ngokubanzi. Ngapha koko, ibanga ukuba yeyona ndawo ikhula ngokukhawuleza ye-blockchain ecosystem, ineeprojekthi ezingaphezu kwe-400 ezakhiweyo kwindalo yayo. USolana ukwabango ukuba yeyona ibhlokhi ikhawulezayo kwihlabathi, ekwazi ukuxhasa ngaphezulu kwe-50,000 yeentengiselwano ngomzuzwana.
I-Crypto Enthusiast, ingcali ye-SEO, kunye noMyili wokuQulathiweyo.
Jonga zonke izithuba nguGranit Mustafa
IiRekhodi zikaSolana ezi- $ 2.5 yezigidi zezigidi ukujikelezisa ukuhanjiswa kwe-USDC
Ukuhlaziywa: 13 Septemba 2021
ISolana (SOL) kurekhode ukunyuka kweemeteorio kulo nyaka, ikakhulu ngenxa ye-NFT boom ebhalwe kwiinyanga ezidlulileyo. Nangona kunjalo, uphuhliso olutsha lubonisa ukuba ukwanda kwe-USDC (i-USD Coin) ejikeleza uthungelwano kukwadlala indima kwixabiso lokunyuka kwamaxabiso.
Idatha yamva nje evela kumhloli wamazwe waseSolana ibonise ukuba iakhawunti yangoku yokuhambisa unikezelo lwe-USDC kwinethiwekhi ikufutshane ne- $ 2.5 yezigidigidi.
Ethetha ngesihloko, uMseki-ntsebenziswano kunye ne-CEO ye-Circle, inkampani ebambe umva kwi-solidcoin-pegged solidcoin, uJeremy Allaire, uqaphele ukuba ukubonelelwa kwe-USDC eSolana kuthabathele ukusuka kwi-1 yezigidigidi ukuya kwi-2 yezigidigidi ngeentsuku nje ezimbalwa.
Isigqeba sikwaqwalasele ukuba umzabalazo wokudibanisa i-USDC kuthungelwano lweSolana yayiyinxalenye yesicwangciso seqela esasazisayo "I-Multichain USDC, yenza ubuhlakani namakhonkco [amaninzi] abalulekileyo." UAllaire wongeze ukuba bayamamkela uSolana njengelinye lawona maqonga alungileyo okutyhala iinjongo zabo ngenxa "Isikali, isantya, kunye nendleko ezithe vetshe ezinokuzisa kwi-USDC."
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, inani elikhulayo le-USDC kuthungelwano lukaSolana lube nefuthe elibalulekileyo kwi-blockchain kwaye, ngokongeza, ithokheni yemveli-i-SOL.
I-SOL okwangoku ithengisa ngaphezulu kwe-2,000% ngonyaka ukuya kuthi ga ngoku kwaye inyuke nge-216 yeedola.
Amanqanaba aphambili eSolana okuBukela-nge-13 kaSeptemba
I-SOL ibuyile yaya kwindawo eyi-150 yeedola njengoko imarike ye-crypto ijika ibomvu krwe ngoMvulo. Olu nyuselo luza kungekudala emva kwexesha elide phakathi kwe-190 kunye ne-170 yeedola kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, kulandela ukwaliwa kabukhali kwi-216 yeedola ngalo lonke ixesha ngoLwesine ophelileyo.
Oko kwathethi, iinkunzi zenkomo kufuneka zigcine ixabiso elingaphezulu kwendlela enyukayo kunye nenkxaso ye- $ 146 ngaphezulu kweeyure okanye iintsuku ezizayo ukunqanda iibhere ekomelezeni ukubambelela kwazo kwintengiso.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 170, $ 180, kunye ne- $ 190, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 146, $ 130, kunye ne- $ 120.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.04 zezigidi
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 46.9 billion
I-Solana Breaks Record ephezulu emva koPhezulu, ibeka i-Dogecoin kwi-Cap Ranking
Ukuhlaziywa: 3 Septemba 2021
ISolana (SOL) Ngaphandle kwamathandabuzo, ngomnye wabadlali abaphambili kwimveliso ye-crypto kulo nyaka. Emva kokucoca irekhodi eliphezulu emva kokuphakama kwerekhodi, i-SOL ibhukuqe iDogecoin ukuba ibe yindawo yokugcina imali yesixhenxe ngobukhulu.
Yaziwa njengenye yeqonga lokukhula ngokukhawuleza kwebhlokhi okwangoku, uSolana uye waba ligama elomeleleyo kunye neqonga elithandwayo kwiiprojekthi ezininzi zeDeFi kunye neeNFTs. Ukuxhamla kwi-boom kwizithuba ze-DeFi kunye ne-NFT, uSolana uye wakhulisa iimeko zokusebenzisa, ezityhale ixabiso le-cryptocurrency yayo (SOL) ukuya kwiindawo eziphakamileyo.
Ekupheleni kukaJulayi, i-SOL yehla yaya kwi-20 yeedola. Ngelixa uninzi lwee-cryptos ziphinde zabuya nge-50% ukuya kwi-100%, eyona mali yesixhenxe ngobukhulu iye yagqwesa phantse kuzo zonke ezinye iingqekembe. Kuthathe i-SOL kwiiveki nje ezimbini ukusukela kwengozi yayo kaJulayi ukuphinda kabini ixabiso layo ngokuchasene ne-USD. Nangona kunjalo, igcinwe kwikhosi yayo ye-bullish kwaye yachukumisa uphawu lwe- $ 100 okokuqala ngqa ngasekupheleni kuka-Agasti, inzuzo engama-400% engaphantsi kwenyanga. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency ihlala iqinile kwaye iqhubeka nokunyuka kwayo ukuya kwi-140 yeedola kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, ukonyuka ngama-600% ukusukela ngoJulayi 20.
Ukusebenza okunomtsalane ngakumbi kwethokheni kukuma konyaka. Ukuqala ngo-2021 ngeenxa zonke zeedola eziyi-1.5, i-SOL inyuke ngemozulu ngaphezu kwe-9,000% YTD.
Amanqanaba aphambili eSolana okuBukela-nge-3 kaSeptemba
I-Solana ikwimo ye-bullish enamandla phakathi kwemfuno ekhulayo ye-SOL. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ikwimeko yokufumanisa amaxabiso njengoko iqhuba imimandla engafakwanga ndawo, isinika amandla amakhulu okurekhoda iindawo eziphezulu. Nangona kunjalo, isikhombisi sethu seMACD sibonisa ukuba imali yedijithali igqume kakhulu kwaye ifuna ukukhupha umphunga xa ulungiswa.
Oko kwathiwa, sinokubona ukulungiswa kwe-bearish kwinqanaba le-120 leedola okanye ezantsi kwimpelaveki.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 146, $ 160, kunye ne- $ 170, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 130, $ 120, kunye ne- $ 110.
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 41.6 billion
Solana ubukhosi: 1.83%
← Entsha izithuba 1 2 3 abaDala izithuba →